Auteur Tom Airbus A330-200MRTT FSX - Rikoooo
Downloads 28 481
Mpanoratra: Modelin'i Thomas Ruth, Updates by Chris Evans & Louis Quintero & Rikoooo
Nohavaozina taminy 03 / 06 / 2018: Mifanaraka amin'ny Prepar3D V4 +, ny takelaka roa: Tanker Allemagne sy RAAF, vaovao fitifirana vaovao, tontolon'ny HD vaovao ho an'ny kabinetran'ny virtoaly, feo vaovao, new panel 2d, nampian'i FMC, nanampy ny Autoland CAT II sy III, nampian'i Airbus GPWS.
Fiarandalamby mahavariana avo lenta ho an'ny dikan-teny rehetra FSX ary Prepar3D. Tonga miaraka amin'ny tabataba virtoaly sy feo mahazatra. Ampidiro amin'ny fantsom-pihetseham-panafody miloko sy miasa, vakio ny boky mba hianarana ny fomba fampiasana azy.
Eo ambany ny pikantsary amin'ny tontonana fanangonana milina (mena mena) izay tsy misy afa-tsy avy amin'ny saribakoly virtoaly.
Sary maro samihafa
Fiaviana sy ny famaritana ny tena fiaramanidina:
Ny Anjara asa Multi A330 sambo Transport (MRTT) dia miaramila derivative ny Airbus A330-200 sidina. Izany dia natao ho toy ny andraikitra roa sosona-rivotra-to-rivotra refueling sy ny fiaramanidina fitaterana. Fa ny rivotra-to-rivotra refueling asa fitoriana ny A330 MRTT azo fitaovana amin'ny fitambaran'ny akory va ny rafitra manaraka ireto:
* Airbus Miaramila Aerial Refuelling Boom System (ARBS) ho an'ny mpandray receptacle-ampy fitaovana fiaramanidina.
* Cobham 905E ambany-elatra refueling pods ho ampy fitaovana fangadiana-mpandray fiaramanidina.
* Cobham 805E Fuselage Refuelling Unit (FRU) ho ampy fitaovana fangadiana-mpandray fiaramanidina
* Universal Aerial Refuelling Receptacle System Installation (UARRSI) ho an'ny tena-refueling.
Ny A330 MRTT manana fahaiza solika ambony indrindra ny 111,000 kilao (245,000 lb). Standard solika fahaiza-mamela ny kalesy iray fanampiny 45,000 kilao ny entana. Ny A330 ny elatry MRTT manana rafitra iombonana sy ny efatra-maotera A340-200 / -300 amin'ny nanamafy fitomboan'ny toerana ho an'ny A340 ny outboard milina. Ny A330 ny elatry MRTT koa dia mitaky fanovana kely ny fampiasana ireo hardpoints ny elatry refueling pods.
Ny A330 MRTT trano fialan-tsasatray dia natao mba hiantohana optimum seza configurations amin'ny kilasy rehetra, izay samy faran'izay betsaka fahafahana sy ny fampiononana. Ny efitra dia afaka ny mampihaino ao lehibe isan-karazany ny fandrindran-takila avy 253 seza tao amin'ny kilasy telo fanahafana, amin'ny alalan'ny 298 mpandeha ao amin'ny kilasy roa-fanahafana, mba 380 mpandeha amin'ny iray kilasy fanahafana. Ny efitra dia efa nasiana fipetrahana tamin'ny attractively famolavolana ankehitriny. Ireo endri-javatra isan-karazany hahafahan'ny tanteraka ny configurations avy amin'ny fanalehibiazana jirika fitaterana ho sarotra customization tsara ho VIP sy ny vahiny misiona. An voatery Crew Fitsaharana mampitohy (CRC), miorina ao amin'ny trano fialan-tsasatray nandroso azo nametraka ho nanam tantsambo, mba hampitombo ny fotoana ampy ho an'ny asa fitoriana. Ny mpandeha trano fialan-tsasatray ny A330 MRTT azo omena amin'ny napetraka ny removable airstairs mba hahatonga ny tantsambo sy ny mpandeha mba hiditra sy handao ny fiaramanidina rehefa airbridges na ny tany fanohanana tsy misy fitaovana.
Ny A330 MRTT koa ny mampihaino azy hanao fitsaboana fanangonana (Medevac) asa fitoriana. Ny lehibe haben'ny mamela ny fuselage manovaova ambony indrindra ary miantoka fampiononana rehetra marary, ohatra ka mba 130 faneva filanjana azo entina.
Toy ny A330-200, ny A330 MRTT ahitana tokotanin-tsambo roa ambany entana efitrefitra (handroso sy aft) sy ny ankamaroan'ny faritra fahaizany izay mampiseho bebe kokoa ny Hainy ny fiaramanidina. Mihazona ny entana no farany mba ho afaka ny fitaterana ny mba 8 miaramila pallets, ankoatra ny sivily ULD.
Ny Hainy ny A330 MRTT mahatonga ny maro ny entana safidy mba ho entina ao amin'ny tokotanin-tsambo lehibe voatery entana mampitohy. Avy amin'ny fitsipika ara-barotra sy ny fitoeran pallets amin'ny alalan'ny miaramila, ISO sy ny OTAN pallets (anisan'izany ny toerana) sy ny kaontenera, ny miaramila sy ny fitaovana lehibe hafa zavatra izay mavesatra amin'ny alalan'ny entana varavarana.
Standard ara-barotra A330-200s Lavitra Airbus Final Fivoriambe-dalana, any Toulouse (France) ny Airbus Miaramila Fiovam-po Centre in Getafe (Espaina) for Mety tsara ny rafitra sy ny miaramila refueling avionics. Ny lahateny voalohany ny fandefasana mpanjifa, Aostralia no nomanina ho tapaky ny volana 2010. Qantas Fiarovana Services dia mamelombelona ny sisa A330-200s efatra ao amin'ny ny Brisbane Airport toerana ho an'ny EADS ho an'ny RAAF.